Yonke into ofuna ukuyifumana ngokubhala ezibalulekileyo iingcebiso
Ingaba umsebenzi oye wachitha ukuhlaziya ama-movie, umculo, iincwadi, imiboniso yeTV, okanye ivenkile ibonakala ngathi yi-nirvana kuwe? Emva koko ungumgxeka ozelwe. Kodwa ukubhala ukuphononongwa okukhulu kukubugcisa, obuncinane abaye bafunda.
Nazi ezinye iingcebiso:
Yazi Isihloko Sakho
Abaninzi abaqalayo abagxekayo bafuna ukubhala kodwa bangazi kakuhle ngesihloko sabo. Ukuba ufuna ukubhala izibuyekezo eziphethe igunya, kufuneka ufunde konke onakho.
Ufuna ukuba nguRoger Ebert olandelayo? Thatha iikholeji kwimbali yefilimu , funda iincwadi ezininzi ezinokukwazi kwaye, ngokuqinisekileyo, jonga amaninzi amabhayisikobho. Kuyafana nawuphi na umxholo.
Abanye bakholelwa ukuba ukuze ube ngumgxeki wefilimu omhle kufuneka usebenze njengomlawuli, okanye ukuba uhlolisise umculo kufuneka ube ngumculi wengcali. Olu hlobo lwamava aluyi kubuhlungu, kodwa kubaluleke kakhulu ukuba ube ngumgcini onolwazi olufanelekileyo.
Funda amanye amaCritics
Njengokuba umlobi wenqweno ufunda abalobi abakhulu, uhlalutyi olungileyo kufuneka afunde ababuyekezi abaphumeleleyo, nokuba ngaba u-Ebert okanye uPauline Kael okhankanywe ngasentla kwifilimu, uRuth Reichl ukutya okanye uMichiko Kakutani kwiincwadi. Funda ukuhlolwa kwabo, hlalutya oko bakwenzayo, kwaye ufunde kuzo.
Musa Ukwesaba Ukuba neengcamango Zomeleleyo
Abagxeki abaninzi banemibono enamandla. Kodwa abatsha abanokuzithemba kwiimbono zabo bahlala bebhalela ukuphononongwa kweenqweno ezinomxholo othi "Ndiyinto enokuzonwabisa ngayo" okanye "yayilungile, nangona ingaba yinto enhle." Banoyiko lokuma ngamandla ngenxa yokwesaba ukuba umngeni.
Kodwa akukho nto iyakhazamisayo kunokuba kuhlaziywa kwe-hemming-and-hawing. Ngoko ke unqume oko ucingayo kwaye uyichaze ngokuqinisekileyo.
Gwema "I" kunye "Kwingxelo Yam"
Abaninzi abahlalutyi bepilisi ngempendulo enjengamagama athi "Ndicinga" okanye "Ngokombono wam." Kwakhona, oku kudlalwa ngama-novice abagxeki besaba ukubhala izivakalisi ezivakalisileyo .
Iibinzana ezinjalo azidingekile; Umfundi wakho uyaqonda ukuba uluvo lwakho ohambisa ngalo.
Uhlalutyo lomgxeki luyilo lophambili lwaluphi na uphononongo, kodwa oko akusebenzi kakhulu kubafundi ukuba akaboneleli ngolwazi oluyimvelaphi olwaneleyo.
Ngoko ukuba uhlaziya i-movie, cacisa isalathiso kodwa uxoxe nomlawuli kunye namafilimu akhe adlulileyo, abadlali, mhlawumbi nakwi-screenwriter. Ukugxeka irestlo? Kwavuleka nini, ngubani ophethe kwaye ngubani oyintloko yokupheka? Ubugcisa bubonisa? Sitshele okufutshane malunga nomculi, iimpembelelo zakhe, kunye nemisebenzi yangaphambili.
Musa ukuphanga ukuphela
Akukho nto abafundi abaye bayayizonda ngaphezu komgxeki wefilimu obanika ukuphela kwesibalo se-blockbuster. Ewe, nikela ulwazi oluninzi lwengcaciso, kodwa musa ukuyeka ukuphela.
Yazi Abaphulaphuli Bakho
Ingaba uloba umagazini ojoliswe kwiingqondo okanye ukupapashwa kweentengiso kumntu oqhelekileyo, gcina ingqalelo abaphulaphuli bakho. Ngoko ukuba uhlaziya ifilimu yokushicilela ejoliswe kwi-cineastes, unako ukuxubusha nge-Italian neo-realists okanye i-New Wave yesiFrentshi. Ukuba ubhalela abaphulaphuli ababanzi, izibhengezo ezinjalo akunokuthi zithethe kakhulu.
Oko akuthi ukuba awukwazi ukufundisa abafundi bakho ngexesha lokuphonononga.
Kodwa khumbula - nokuba umgxeki onolwazi akayi kuphumelela xa ebetha abafundi bakhe ngezinyembezi.
Nantsi indlela ongayakha ngayo i-Journeyalism ephawulekayo yePortfolio
Indlela yokusebenza kunye nemithombo engaziwayo
I-Majors yeShishini: UkuThengiswa kweNtengiso
I-Storge: Uthando Lwentsapho eBhayibhileni
Iimpawu ezisisiseko zesiLwimi - Inkcazo
Yintoni iContain Triangle?
Imbali Yomthetho wokuKhuphela
UDame uHelen Mirren Uxubusha "U-Queen"
I-Cheerleading Basketball Cheers
I-Nightmare eyayiyinkampu yamajele yaseAndersonville
Iinqununu ezisiSeko ezisiSeko zoBunzima bokuHlola ubuso
Ukwenza Ukuphila KwiMaga
Adine College Admissions
IiNcwadi eziLawulayo ezilungileyo kwiNgqondo yeGalofu
Funda ukuKhowula: iHarvard ye-Free Online Computer Science Course
Isigaba sesiBini seKuQubulo: Ukuqokelela iQi
Isiqhumiso, i-Asthma kunye ne-Allergies